ဆောင်းပါးများ | TVET Myanmar
10 Jul 2018 - 05:17
သင်တန်းတွေပေးတော့မယ်ဆိုရင် Training Needs Analysis အရင်ဆုံးစလုပ်ရမှာပါ ။ ဒိနေရာမှာ TNA ကို အရင်ဆုံးနားရှင်းအောင် တင်ပြချင်ပါတယ် ။ Training Needs Analysis ဆိုတာက အတိုချုပ်မှတ်ရရင် Training needs analysis isasystematic process of understanding training requirements လို့ဆိုပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေက မိမိအဖွဲ့အစည်းတွေကို သင်တန်းပေးတဲ့အခါ ဝန်ထမ်းတွေကို ဘာသင်တန်း တတ်ချင်တာလဲ ဆိုပြီး မေးမြန်းတာ စစ်တမ်းကောက်ယူတာမျိုး မဟုတ်ပဲ လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖော်ထုတ်ပြီး ထိရောက်တဲ့ သင်တန်းပေးခြင်းမျိုးဖြစ်စေဖို့ စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ရတာမျိုးပါ။
ပညာရေးအညွှန်းကိန်းများနှင့် TVET Management (အပိုင်း-၁)
22 Feb 2017 - 09:56
written by Dr. Kyu Kyu Swe
ယခုပို့စ်အား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော ပညာရေးသတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EMIS – Education
Information Management System) နှင့် ပတ်သက်သောအစည်းအဝေးများမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော ပညာရေး
သတင်းအချက်အလက်များအား Statistical Analysis ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပညာရေးအညွှန်းကိန်းများ မြင့်တင်ပေးခြင်း
ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ ရရှိလာသောအတွေ့အကြုံကိုအခြခံပြီး ပြန်လည်ရေးသားဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါသည်
ဒုတိယတန်းစားမဟုတ်သည့် TVET ပညာရေး
ရေးသားသူ ခင်စန္ဒာမြင့်၊ ၂၃ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၆
“နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာရေးTechnical Vocational Education and Training (TVET)” လို့ ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်
ယနေ့ခေတ်လူအများစု တွေးထင်လိုက်တာက နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေကိုပါပဲ။ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နည်းပညာနှင့်သက်မွေး
ပညာရေးကို ဦးစီးဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာ ၁၉၇၂ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ရက်နေ့ကတည်းက စတင်ဖွဲ့စည်း
နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး အားသာချက်များ
22 Feb 2017 - 09:52
(၁) အမျိုးသားပညာရေးဥပဒ ပေါ်ထွက်လာပြီးနည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍသည် အဓိကပညာရေးစနစ်တစ်ရပ်အပါအဝင်အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်း။
(၂) နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍအတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာန (၁၂)ခုတို့ ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။
(၃) အလုပ်အကိုင်နေရာအသီးသီးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု စံချိန် စံညွှန်းများ သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်း။
Developing Learning Outcomes (အပိုင်း-၄)
22 Feb 2017 - 09:49
Learning Outcomes ဖော်ထုတ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သော ကြိယာ(verbs) များ
Developing Learning Outcomes (အပိုင်း-၃)
22 Feb 2017 - 09:47
Learning Outcomes Vs. Assessment ဆက်စပ်မှု
Dr. Kyu Kyu Swe, DTVE
စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများ ဘာလဲ/ ဘယ်လဲ? (၂)
22 Feb 2017 - 09:45
credit to Zayar Min Oo’s Post
အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေလည်း အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး သင်တန်းတစ်ခု စတင်ဖွင့်လှစ်တော့မယ်ဆိုရင် သင်တန်းသား/ကျောင်းသားခေါ်ယူရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ လူငယ်တွေရဲ ့ပညာရေးလမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုဟာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများမှုနဲ ့ပေါ်ပင်ဖြစ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်တာဟာ
၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာရှိနေပါတယ်။ ရမှတ်အနည်းအများကလည်းရွေးချယ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသင့်သလောက်ရှိသလို
စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများ ဘာလဲ/ ဘယ်လဲ? (၁)
22 Feb 2017 - 09:13
credit to Zayar Minn Oo’s from Face Book Post
(ဖေ့စ်ဘုတ်မှ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ဆရာသမားများခင်ဗျား ကျွန်တော်လက်ရှိတာဝန် ထမ်းဆောင်ဆဲစက်မှုသင်တန်းကျောင်းများ ရေရှည်တည်တံ့ပြီး အောင်မြင် တိုးတက်နိုင်စေဖို ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ ဘဝအတွေ ့အကြုံ ၊မှတ်သားခဲ့ရတဲ့ အသိပညာတွေအပေါ်အခြေခံပြီး တတ်သလောက် မှတ်သလောက်လေး တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။)
Developing Learning Outcomes (အပိုင်း-၂)
posted by: Dr. Kyu Kyu Swe, DTVE
Learning Outcomes တွေမှာဖော်ထုတ်ရာမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကြိယာ (verbs) များကိုအောက်ပါအတိုင်းအမျိုးအစားများခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
(၁) သတင်းအချက်အလက်မှတ်မိမှုစေလိုမှုကိုရည်ရွယ်တဲ့ Learning Outcomes တွေကို
“will be able to” + “define, identify, list, name, recall, repeat, state” စတဲ့ကြိယာများကိုအသုံးပြုဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
(၂) သင်ခန်းစာအပေါ်နားလည်မှု (Understand) ကိုဖော်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်တဲ့ Learning Outcomes တွေကို
“will be able to” + “classify, describe, locate, report, restate, summarize” စတဲ့ကြိယာများကိုအသုံးပြုဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
Developing Learning Outcomes (အပိုင်း-၁)
22 Feb 2017 - 09:09
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရေးဆွဲမည့်သူများအနေနဲ့ Learning Outcomes ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဟာ အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမဲ့အချက်ပါ။ Learning Outcomes ဆိုတာကို
“Learning Outcomes are statements that describe the knowledge or skills students should acquire by the end ofaparticular assignment, class, course, or program, and help students understand why that knowledge and those skills will be useful to them.” လို့  မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
တက္ကသိုလ်များတွင် Performance ကို အခြေခံ၍ ရာထူးတိုးပေးခြင်းလုပ်ငန်း၏ အတိမ်အနက်ကိုဆွေးနွေးခြင်း
22 Feb 2017 - 09:07
credit to: Dr. Kyi Shwin
(အဆင့်မြင့်ပညာ တက္ကသိုလ်များအတွက် စာတမ်းတစ်စောင်ကို ဆန္ဒအလျောက် ပြုစုရေးသားနေပါတယ်။ ရေးသားပြုစုပြီးရင် အကဲဖြတ်ပေးကြပါဦး။ အခုလဲစတင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။စာတမ်းပြီးရင် အရင်စာတမ်းလိုဘဲ အားလုံးအတွက် ဝေမျှပါမယ်။)
မြန်မာ ပညာရေးကို ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲ
By ခင်မောင်လွင် (အေးရှားမာစတာစ်) ASEAN Master Trainer and Assesor
ပညာရေးလို့ ပြောလိုက်ရင် အများစုက ကျောင်း၊ စာသင်ခန်း၊ စာမေးပွဲလို့ပဲ မြင်ကြတယ်။ တကယ်တော့ ပညာရေးဆိုတာက တစ်မျိုးသားလုံး တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ အလေအလွင့်မရှိပဲ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း Productive ဖြစ်လာအောင် လုပ်ကြဖို့ပါပဲ။ ဒီလိုဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့နေရာမှာ အခြေခံပညာအဆင့်၊ အဆင်မြင့် ပညာ နဲ့ နည်းပညာနဲ့ အသက်မွေး ပညာဆိုပြီး (၃) ပိုင်းခွဲလို့ရပါတယ်။
အခြေခံပညာဆိုတာက သူငယ်တန်းကနေ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအထိပေါ့။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ပြီး ပြီဆိုရင် ကောလိပ်တွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေက အဆင့်မြင့် ပညာရေးပေါ့။ နောက်နည်းပညာနဲ့ အသက်မွေးပညာက တစ်ပိုင်းပေါ့။